> Resource > Ladnaansho > Sidee inuu ka soo kabsado Photos ka Canon PowerShot S95
Waxaan soo kaban karto, tirtiray Photos ka Canon PowerShot S95?
Waxaan mar walba tirtirto photos aan loo baahnayn ka Canon PowerShot S95. Laakiin waxaan kaliya tirtiray qaar ka mid ah sawirada aad u muhiim ah oo istareexa. Waxaan la yaabanahay haddii aanay suurogal ah ayay ii tahay inaan u celinaynaa. Fadlan kula talinayaa. Mahad badan.
Tirtirka ah Shil waa mid ka mid ah sababaha ugu badan ee loo soo gaartay sawir. Si kastaba ha ahaatee, mid ka mid garwaaqsiga sawiro laga badiyay waa in ay ma idlaan doonaan haddii ayan qabin overwritten by xog cusub oo ku saabsan qalab aad kaydinta. Tani waxay suurtogal ah in aad ka bogsato sawiro ka Canon PowerShot S95 inta aad joojiso isticmaalka camera aad.
Wondershare Photo Recovery ama Wondershare Photo Recovery for Mac waa codsi lagu kalsoonaan karo soo kabashada taas oo ka caawisa in aad ka bogsato lumay, tirtiray, formatted iyo sawiro laga Canon PowerShot S95 camera digital gudahood 3 talaabooyin fudud. Waxa kale oo ay awoodaan in ay soo kabsadaan files iyo videos audio ka camera aad sidoo kale. All inaad samayso waa in ay iskaan la barnaamijkan ka dibna soo kabsado helay sawiro.
Waxaad kala soo bixi kartaa version maxkamad barnaamijka hoos ku qoran.
Kabsado Photos ka Canon PowerShot S95 in 3 Talaabooyinka
Haddaba aan ka bilowno kabashada sawir Canon PowerShot S95 la Windows Version of Wondershare Photo Recovery. Users Mac aad u raaci karaan talaabooyin la mid ah la version Mac.
Fiiro gaar ah: Fadlan xiriiriyaan Canon PowerShot S95 ama kaadhka xusuusta ay la computer si aad u bilowdo.
Tallaabada 1 Marka bilaabay Wondershare Photo Recovery on your computer, aad arki doonaa suuqa kala ah sidan. Barnaamijku wuxuu ku tusi doonaa dhammaan qalabka ay taageerayaan daaqadan. Oo waxaad uun u baahan yihiin inay guji "Start" si loo bilaabo nidaamka oo dhan.
Tallaabada 2 Halkan codsiga si toos ah lagu ogaan doonaa oo qoruhu show / drives on your computer. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay in ay doortaan mid ka mid ah si aad u Canon PowerShot S95 oo guji "Scan" si ay u bilaabaan iskaanka sawiro laga badiyay waxaa ku.
Tallaabada 3 helay files aad Canon PowerShot S95 ama kaadhka xusuusta ay la soo bandhigi doonaa 3 qaybood kadib markii iskaanka: "Photo", "Audio" iyo "Video".
Waxaad dooran kartaa "Photo" category in Falanqeynta helay images si loo hubiyo sida badan oo sawiro laga badiyay lagu soo kabsaday karo.
Waxaad soo kaban karto sawiro tirtiray ka Canon PowerShot S95 markaas: calaamadee sawiro aad rabto in aad dib u soo ceshano oo guji "Ladnaansho" badhanka si ay u badbaadin on your computer.
Fiiro gaar ah: Si looga fogaado xogta overwritten, fadlan ha ku hayn toos ah photos soo kabsaday si aad Canon PowerShot S95 inta ay socoto dib u soo kabashada.